नेकपा बहश : प्रचण्डतर्फ ढल्कँदै ओली !, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
नेकपा बहश : प्रचण्डतर्फ ढल्कँदै ओली !
काठमाडौं। तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण गर्ने सहमतिका साथ गठबन्धन बनाएर चुनावमा जाने निर्णय भएसँगै भावी नेतृत्वको बहस पनि शुरु भएको थियो। त्यति बेला जसरी पनि पार्टी एकीकरण गरिछाड्ने अठोट लिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केपी ओलीप्रति बढी ढल्किए।
फलस्वरुप पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यदिशामा धेरै विवाद नगरी ओलीलाई पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व दिन प्रचण्ड तयार भए। भलै त्यो आलोपालोको सहमति थियो। पहिलो पालो ओलीले पाए, पार्टी एकीकरण भयो, सरकार बन्यो।
दिनहरु बित्दै जाँदा एकीकृत पार्टीमा ओलीले प्रचण्डलाई आफ्नो पछाडि लगाउने नीति लिइरहेकै बेला परिस्थिति भने ठिक उल्टो बन्दै गएको केही घटनाहरुले देखाएको छ। अथवा अब प्रचण्ड ओलीतर्फ नभइ ओली प्रचण्डतर्फ ढल्किन थालेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहारण हो मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्ति।
ओली प्रचण्डतर्फ ढल्किन थालेका छन्। यसको पछिल्लो उदाहारण हो मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्ति।
सो कार्यक्रममा ओलीले पार्टीको सैद्धान्तिक कार्यदिशा ‘जनताको जनवाद’ नै हुने स्वीकार गरे। जबकी उनी ईश्वर पोखरेल मार्फत जनताको बहुदलीय जनवादमा दाहाललाई हिँडाउने प्रयाशमा लागेका थिए।
पार्टी भित्रको आन्तरिक समिकरण बदलिएपछि ओली पछिल्ला दिनहरुमा दाहालको लाईन स्वीकार गर्न बाध्य जस्तै बन्दै गएका छन्। यसको अर्को उदाहरण हो पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका माधव नेपाललाई ‘कुल डाउन गर्न’ प्रचण्डकै लाइनअनुसार ओली कार्यदल बनाउन तयार भए।
आईफा प्रकरणमा पनि ओली प्रचण्डको सुझावपछि ‘ब्याक’ भएका छन्। पार्टी होस वा सरकारका विवादित विषय टुंगो लगाउन ओलीले प्रचण्डको साहारा लिनुपर्ने अवस्था बनेको छ।
सरकारको तीव्र आलोचना हुँदा प्रचण्डले सबैभन्दा बढी सरकारको प्रतिरक्षा गरेका थिए। संसदमा सम्वोधन गर्दा सत्तारुढ दलकै सांसदले सरकारको विरोध गर्दा प्रचण्डले भने सरकारको बचाउ गर्दै आएका छन्। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन हुँदासमेत जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै विरोध हुँदा प्रचण्डले सरकारले दीर्घकालीन महत्वका काममा ध्यान केन्द्रत गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भाग लिन दिल्ली गएका बेला अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफूहरुबीच ‘आलोपालो सरकार संचालन गर्ने’ सहमति भएको सार्वजनिक गरेपछि दुई अध्यक्षबीचको सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो।
प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउन ओलीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि दुई अध्यक्षबीचको विवाद सहतमा नै देखिएको थियो। प्रचण्डलाई साइजमा ल्याउन जबजको कार्ड फालेपनि सफल भएनन्। पार्टीका हरेक संरचनामा आफू अल्पमतमा पर्न थालेपछि तत्कालका लागि प्रचण्डको कुरा सुन्न थालेका हुन्।
ओलीले प्रचण्डका कुरा सुन्न थालेपनि राजनीतिक प्रतिवेदन अझै प्रकाशित हुनसकेको छैन्। सचिवालय बैठकले प्रकाशनको अन्तिम तयारीमा रहेको र केही दिनमा नै प्रकाशन गर्ने बताएपनि अहिलेसम्म प्रकाशन हुन सकेको छैन।